के पातली हुँदैमा महिलाको स्तन पनि सानो हुन्छ - Mitho Khabar
के पातली हुँदैमा महिलाको स्तन पनि सानो हुन्छ
April 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on के पातली हुँदैमा महिलाको स्तन पनि सानो हुन्छ
स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन, यौ न का दृष्टिकोणले पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण अ’ङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ । स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा लगभग पूरा हुन्छ । स्तनको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ ।
स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । व्यक्तिअनुरूप स्तनको स्वरूप एवं आकारमा धेरै विविधता पाइन्छ । स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुरा निम्न छन् ।
स्तनका तन्तुको मात्रा पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइ वा तन्कन सक्ने गुण रागरस हार्मोनहरूको प्रभाव । स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । किशोरावस्थामा स्तनको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र त्यति बेला यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिएका हुनाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा हुन्छ ।
उमेर बढ्दै गएपछि स्तनको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ । स्तनको आकारमा वंशाणुगत प्रभाव एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर पोषणको । यी दुवैको संयुक्त प्रभाव स्तनको आकार निर्धारणमा महत्वपूर्ण छ । आमा र दिदीहरूको स्तनको आकार प्रकारसँग धेरै मिल्नु वंशाणुगत कारण हुनसक्छ ।
पातली हुँदैमा स्तन पनि साना हुन्छन् र ।
शरीरको तौल अनुसार अन्य भाग जस्तो ठयाक्कै नहुने भएपनि तौल कम हुँदाको स्तन पनि सानो हुने स्थिति रहन्छ । हामी शरीरको कति हेरेर तौल सामान्यभन्दा कम वा बढी भएको निक्यौल निकाल्छौं । सामान्यत हामी वयस्क व्यक्तिको उचाइ र तौलका आधारमा शरीरमा कति बोसो छ नाप्छौं । हुन त यो पद्धतिका पनि आफ्नै सीमितताहरू छन् । यो यदि १८ दशमलव ५ देखि २४ दशमलव ९ सम्म छ भने त्यसलाई सामान्य तौल मानिन्छ । हरेक पल डट कम बाट ।
नाइट ड्युटी गरेर घर फर्किँदा श्रीमतीलाई भित्र यस्तो बिजोग अवस्थामा देखेपछि…
पहिलोपटक यौ’नसम्पर्क गर्दा किन डराउँछन युवती, नेपाली युवतीको अनुभव !
नायिका स्वस्तिमा र सुपुश्पा ठमेलको बारमा यस्तो डान्स गर्दै हेर्नुहोस् भिडियो सहित
शनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता चिज, नत्र रिसाउनेछन् शनिदेव !
September 19, 2020 Suman Pandey
शुक्रबार यस्ता काम गर्दा चम्किनेछ तपाईको भाग्य
विराट कोहलीले अनुष्कालाई मुम्बई एयरपोर्टमा चुम्बन गर्दै समाते ( हेर्नुहोस् भिडिओ)
प’क्राउ परेका एक जो’डीले पुलिसको गा’डिमै यस्तो घि,न् ला,ग्दो हर्कत ग’रेपछी (भाइरल भिडियो हेर्नुहोस )
जतिसुकै बिजि भएपनी केबल १ मिनेट समय दिएर पढिदिनुहोला ! नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ !
डाक्टरले भने पछी आखा चि’म्लेर खो’लिदिए.. अ’न्तिम स’म्म यस्तो गरे ! (भिडियो सहित) !
कस्ताे ठाउको कोठिले कस्तो संकेत दिन्छ ! जानुहोस् ;
पेट्रोल ट्यांकर त्रिशूली नदीमा खसेर आगलागी ! कसरी त ? जान्नुहोस् ;
काठमाडौमा अब निषेधाज्ञा नलगाउने, कोरोना नियन्त्रणका लागि अब यस्तो नयाँ ब्यवस्थाा ! जान्नुहोस्
रुसमा एक नेपालीले को’रोना भाइ’रस बिरु’द्धको भ्याक्सि’न लिए
शुसान्त र सारा अलीको रमाइलो भिडियो भाइरल…
छोराको अनुहार आफ्नो जस्तो नभएपछि श्रीमानले अनुसन्धान गर्न थाले , खुल्यो यस्तो विचित्रको रहस्य !
इलामका पाँच युवाहरुद्धारा कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्न मिल्ने रोबोट निर्माण ! जान्नुहोस् ; कसरी गर्छ त काम ?
भूलेर पनि गर्न हुँदैन। महिला हरूले यी ९ काम, मानिन्छ निकै अशुभ जान्न जरुरी।
बुटवलको ग्लोबल आवाजको कार्यालयमा ढुंगा प्रहार
कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कांग्रेस सभापति आइसोलेशनमा
यी व्यक्तिहरुले भुलेर पनि नखानुस् अनार ! नत्र …..
कुलमान घिसिङ: म एउटा कर्मचारीको लागि सडकमा नआइदिनु होला (भिडियो सहित)
आज शुक्रवार ; सन्तोषी माताको दर्शन गरी जान्नुहोस् आज को राशिफल ; आज यी राशिहरू लाई निकै लाभकारी :
कोरोना भाइरस बारे सबै प्रमाण छरपष्ट, चीनको यी डाक्टरले भित्रि रहस्य सबै खोलिन
कक्षा १२ को परीक्षाबारे आयो यस्तो खबर…..
रातको समय घरमा यी काम गर्दा मिल्छ सधै सुख समृद्धि